Shuruudan Soo Buuxiya!! - Neymar JR Oo PSG U Sheegay HAL Shuruud Oo Kaliya Oo Ay Soo Buuxiyaan Si Uu Iskaga Diido Real Madrid & Barcelona. - Gool24.Net
Shuruudan Soo Buuxiya!! – Neymar JR Oo PSG U Sheegay HAL Shuruud Oo Kaliya Oo Ay Soo Buuxiyaan Si Uu Iskaga Diido Real Madrid & Barcelona.
January 17, 2020 Apdihakem Omer Adem
Garabka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar JR ayaa lagu soo warramayaa inuu diyaar u yahay inuu dhabarka u jeediyo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona haddii ay kooxdiisu hal shuruud oo uu ku xidhay si fiican uga soo baxdo.
Sida lagu sheegay il wareedka ‘ESPN, Neymar waxa uu haatan xiisaynayaa inuu heshiis kordhin u sameeyo kooxdiisa taas oo ah wax gabi ahaanba kasoo horjeeda dhaqankiisii suuqii xagaaga ee 2019.
Wararka xanta ah ee Neymar ayaa xagaagii dhawaa ahaa kuwa ugu hadal haynta badan, Walow uu qarka u fuulay ku laabashada Barcelona haddana ugu dambayn waxa uu kusii negaaday Paris.
Sida lagu sheegay warbixinta ‘ESPN’, Xataa Real Madrid ayaa haysatay fursad ay kula wareegto 27 sano jirkan kahor intii aysan bangiga u jabinin Eden Hazard oo dhinaca Chelsea kaga soo biiray.
Kaddib is xag-xagasho dheer oo soo dhex martay isaga iyo maamulka PSG, Neymar ayaa haatan diyaar u ah inuu iska sii joogo Parc des Princes isagoo aan kaliya joogitaan ku ekaanayn balse heshiis cusub qalinka ku duugi kara.
Waxa u muuqataa in Neymar uu meel iska dhigi doono dabeecadiisa uu eedaymaha badan kula soo kulmay oo uu diirada saari doono kooxdiisa laakiin hal shuruud ayaa ah mida uu ku samayn doono arrintaas.
Shuruuda kaliya ayaa ah inuu doonayo in kooxdiisu ay wax badan ka qabsato Champions League xilli ciyaareedkan intaas kaddibna uu heshiis kordhin u samayn doono.
‘ESPN’ ayaa sheegaya in bilaha soo socda ay aad muhiim ugu ahaan doonaan go’aanka uu qaadan doono xiddiga ree Brazil oo uu heshiiska u dheerayn doono haddii ay wanaag ka sameeyaan CL oo ay ugu yaraan meel fog ka gaadhaan.